Nagu saabsan - Qaybaha Makiinado ee Renqiu City Shuangkun Co., Ltd.
Qaybaha Mashiinka Renqiu City Shuangkun Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 1995, Qaybaha Mashiinka Renqiu City Shuangkun Co., Ltd. waa soo saare xirfadlayaal ah isla markaana dhoofiya wax ka qabanaya naqshadeynta, horumarka iyo soo saarista jeexjeexo, qalab iyo flange.Si aad si wanaagsan ugu qanciso baahida macaamiisha, sameyso Shirkadda 'Renqiu Yizongxi Trading Company' si ay uga caawiso macaamiisha inay iibsadaan qaybo kale oo mootooyin ah. Dhammaan alaabooyinkeennu waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah waxaana si weyn looga mahadceliyaa suuqyo kala duwan oo adduunka oo dhan ah.
Daboolista aag dhan 15000 mitir murabac ah, waxaan hadda haysannaa in kabadan 120 shaqaale, waxaan ku faannaa tirada iibka sanadlaha ah oo kabadan USD 10 milyan oo hadda 80% waxsoosaarkayaga adduunka laga dhoofiyo.
Xarumaheena si wanaagsan u qalabeysan iyo tayada tayada sare leh dhamaan heerarka wax soosaarka waxay awood noo siineysaa inaan damaanad qaadno wadarta qanacsanaanta macaamilka. Marka laga reebo, waxaan helnay shahaadada ISO9001.
Sidaas darteed alaabteenna tayada sare leh iyo adeegga macaamiisha ee aadka u sarreeya, waxaan helnay shabakad iib ah oo caalami ah oo gaareysa Yurub, Koonfurta Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe iyo Afrika.
Waxaan kaa caawin karnaa sidii ganacsigaagu u fiicnaan lahaa.
SHUANGKUN waxay taageertaa guusha macaamiisheena iyo wakiiladeena iyadoo ku bixinaysa wax soo saar tayo sare leh iyo qalab waqti ku habboon oo miyir leh, lana ilaaliyo xiriir aamin ah oo xushmad leh oo lala yeesho shuraako kasta.
Adeegga iibka kahor: La-talin ganacsi oo isku dhafan iyo adeeg naqshadeyn lacag la’aan ah. Bixi alaabooyin kala duwan oo tayo leh oo loogu talagalay tixraaca macaamiisha iyo ka caawinta macaamiisha inay helaan xalka ugu fiican iyada oo ku saleysan khibradeena suuqa
Adeegga qandaraaska: Si adag u dhaqan gelinta xakamaynta tayada ISO, keenista waqtiga ku habboon, abaabulka saadka nabadgelyada iyo taageero maaliyadeed oo wanaagsan.
Adeegga iibka kadib: Waxaan qaadi doonaa 100% xamaasad si aan u xallino oo aan u sameysano malaayiinta qalad ee dhici kara waqtigiisa.
Waxa kaliya ee aan sameyno, si aan u dhinno qiimaha iibkaaga iyo dayactirka, iyo inaan ku adkeysano tartanka suuqa maxalliga ah. SHUANGKUN adeegeeda oo dhameystiran, wuxuu kaa badbaadin doonaa culeys badan oo saarnaa wuxuuna kuu keeni doonaa khibrad farxad leh.
Adeegga VIP adiga
1. Ma jiro amar yar, ma jiro macmiil yar, macmiil kasta ayaa noo ah macaamiisha VVVIP.
Kaliya maahan macaamiil laakiin sidoo kale lamaane ganacsi. SHUANGKUN waxay ku siin doontaa taageero buuxda balaadhinta ganacsigaaga.
2. Adeeg dhakhso leh: Adeegga khadka tooska ah ee 24h ayaa ka jawaaba su'aalahaaga markii ugu horreysay.
Oraah iyo ikhtiyaar ayaa la bixin doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah markii aad hesho weydiintaada.
3. Soo-jeedin Xirfadle ah: iyada oo loo eegayo xaaladdaada shaqo, waxaan kuu soo bandhigaynaa xulashooyinka ugu habboon xulashadaada, oo waxaan u hoggaansameynaa inaan kuu siino wax soo saar habboon.
4. Xiriir wanaagsan: Shaqaalaha suuq-geynta aqoonta sare leh oo dhammaantood wata Shahaadada Fasalka Ingiriisiga (TEM4 Test for English Majors-4 or CET6 College English Test-6 above).
5. Xaqiiqdi hadaad kuhadasho ruushka, faransiiska ama isbaanishka, turjubaanadeena khaaska ah ayaa ku siinaya adeegga ugu dhow.
6. Khibrad Ganacsi: Dhammaan iibka leh wax ka badan 3 sano oo khibrad dhoofineed ah, aqoon u leh siyaasadda dhoofinta iyo hannaanka soo dejinta qaran, waxay kaa caawineysaa sameynta nadiifinta iyo nidaamka soo dejinta si habsami leh.
Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay ku sii noolaanaysaa aaminaadda: "iibinta daacadda ah, tayada ugu fiican, hanuuninta dadka iyo benifits macaamiisha."
Waxaan rajeyneynaa inaan sameysano xiriir ganacsi oo guuleysta macaamiisha cusub ee adduunka mustaqbalka dhow.